I-Semalt Expert: IoT kunye ne-Botnets yokubuyisela kunye neengozi ezinxulumene nazo
Iibhotela zokubuyisela zisetyenziselwa ukuhlawula kunye nokujolisa kwiinkonzo ze-intanethi, ezifana neDDOS (Ukuhanjiswa kweNkonzo yeeNkonzo). Baphinde bahambise inani elikhulu lophulo logaxekile. Ngenxa yokuba abasebenzisi abafumani ngcamango ukuba i-botnets yomvuni ichaphazele iikhompyutheni zabo, kulula ukuba abakwa-spammers bawebe idatha yakho eyimfuneko esetyenziselwa ukukhwabanisa kwezazisi - revenda de hospedagem locaweb wordpress.
uNik Chaykovskiy, u uSemalt uMphathi weNtuthuko yabaThengi, uchaza ukuba into eyona nto ibangelwa yi-cybercriminals kwaye ibathengisa kubathengi be-intanethi. Besebenzisa iibhenets malunga namanye ama-cybercrime kuwo wonke umhlaba. Iibhentshi ze-IoT ziqokelela amacebo ahlaseleyo, kubandakanywa ii-routers, i-DVR, iikhamera, izixhobo ezigugu kunye nobuchwepheshe obuninzi obuhlanganisiweyo. Ixhomekeke kakhulu yiintsholongwane kwaye ivumela abahlaseli ukuba baphathe kwaye benze imisebenzi eyahlukileyo ngaphandle kokungaxhunyiwe kwi-intanethi nakwi-intanethi. Zonke izixhobo ze-IOT zinokukhetha okukhuselekileyo okukhuselekileyo kunye neempawu ezinjengeenkcukacha ezingenakwenzeka, ukungena kwi-admin admin kunye namachweba ahlangeneyo ekufikeleleni okude. Abagxeki baxhatshaza kakhulu izixhobo ngokusebenzisa ukungena kwamandla angamaqhinga kunye nokufaka i-malware ehlukeneyo kwiichweba ezivulekileyo okanye iinkonzo ezikhuselekileyo.
Indlela yokufumana ukuba i-PC yakho inxalenye ye-IOT okanye i-botnets (i-14)
Kulula ukufumana ukuba ikhomputer yakho yinxalenye yebhokisi kwaye unokuvavanya igalelo layo ekusebenzeni kwesixhobo sakho. Xa ikhompyutha iba yinxalenye yebhokisi, isebenza ngokukhawuleza kwaye ayenzi ngokwemiyalelo yakho. Ngaphezu koko, iiwebhusayithi aziyikulayisha ngokufanelekileyo, kwaye iinkqubo zakho zokusebenza zilawulwa ngokugqithiswa ngemibuzo eninzi.
Ezi zintlanzi zisebenza njani?
Umvuni we-botnets kunye ne-IOT ayalelwa ukwenza imisebenzi ethile. Bakhulu becala ukutshintsha ulwazi lomntu siqu ezifana neenkcukacha zekhadi lesikweletu kwaye zingabonakali kubasebenzisi ngenxa yokuziphatha kwazo. Hackers eyaziwa ngokuthi botmasters ngokuyinhloko basebenzisa lezi botnets. Umyalelo kunye neeseva zokulawula zenzelwe ukuhlahla iibhotile.
Ezi mngcipheko zilandelayo zihambelana nalezi botnets.
1. Zizenza ngathi zivumelekile kwaye zibandakanyeka kwimisebenzi enoliseko:
Ubungozi obunxulumene ne-botnets kuyafana neengozi zeenkqubo ezinobungozi kunye nemisebenzi enomdla kwi-intanethi. Ngokomzekelo, iibhenets zenzelwe ukweba ulwazi lwakho kunye nokufikelela kwiinkcukacha zekhadi lakho lekhredithi. Baphinde bafikelele kwiipropati zakho zengqondo, iimpawu kunye neephasiwedi kwaye ngamanye amaxesha kukunyanzela ukuba ucofe kwiikhonkco zabo kwiiwebhusayithi ezihambelanayo. Kufuneka uqonde ukuba xa ikhompyutha yakho isulelekile, ayiyi kuphinda ibe yinto efunekayo kodwa iya kwenza imisebenzi eyabelwe yi-hacker.
2. Akukho mda phakathi kweekhompyutheni zekhompyutheni kunye neenkampani eziphathekayo:
Umgca phakathi kweekhompyutheni zenkampani kunye nezobuqu. Sonke sinokuba ngamaxhoba enkqubo ye-botnet malware, kwaye indlela yodwa yokubagxotha yona ifake iinkqubo zokulwa ne-malware. Ukuchonga nokumisa i-malnet ye-botnet yiyo yonke into oyifunayo ukuqinisekisa ukukhusela kwakho kwi-intanethi. Ukusuka kwimiba yezobuchwepheshe, iibhenets zinokumiswa kunye neenkqubo zokulwa ne-malware okanye i-antivirus. Sinokumisa izifo kwisitratti senethiwekhi kwaye sinokuzilahleka ngokukhawuleza.